Gobolka Sh/hoose oo laga iclaamiyay dagaal ka dhan ah Al-Shabaab – War La Helaa Talo La Helaa
Gobolka Sh/hoose oo laga iclaamiyay dagaal ka dhan ah Al-Shabaab
By Xuseen Madoobe	 Last updated Apr 17, 2019
Guddoomiyaha cusub ee gobolka Shabeellada Hoose Ibraahin Aadan Cali “Najax” oo la hadlay warbaahinta Dowladda ayaa waxaa uu faahfaahin ka bixiyay howlgalo ka socda deegaano hor leh ka tirsan Gobalkaasi.
Waxaa uu sheegay Guddoomiyaha inuu Booqday degmooyin iyo deegaanno ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose oo ay ka mid ahaayeen degmooyinka Baraawe, Wanlaweyn, Afgooye iyo deegaannada Sabiib iyo Caanoole.
Guddoomiye Najax ayaa deegaannadaasi kula soo kulmay saraakiisha ciidamada, mas’uuliyiinta maamullada iyo waxgaradka bulshada, isagoo si hoose ugu kuurgalay xaaladda nolosha dadka iyo baahiyaha ay qabaan.
Sidoo kale Guddoomiye Najax ayaa sheegay in uu wado qorshe dhameystiran oo gobolkaasi looga xoreynayo dagaalamayaasha Al- Shabaab, si loo horumariyo noloshada bulshada loona xaqiijiyo ammaanka muwaadiniinta ku dhaqan gobolkaasi.
Gudoomiye Najax ayaa ka codsaday dowladda Federaalka Soomaaliya in ay gacan ka siiso sidii shabaab looga sifeyn lahaa gobolkaasi, isagoo tibaaxay in uu ka shaqeyndoono soo celinta maqaamkia iyo sharafti uu gobolkaasi ku lahaa dalka.
Najax 2 1024×576
SAWIRRO: Faah faahino dheeraad ah oo laga helayo Qarax goordhow ka dhacay Muqdisho
SAWIRRO: Madaxweyne Farmaajo oo warqadaha Aqoonsiga ka gudoomey Safiiro Cusub